Ukuqashwa kwe-VCW-8 Squadron
Solved Ukuqashwa kwe-VCW-8 Squadron
unyaka 1 6 edlule - unyaka 1 6 edlule #1077 by lharv71
I-VCW-8 Carriers squadron ifuna abashayeli bezimoto abathanda kakhulu i-F-18 noma i-F-14. Siyiqembu elijabulisayo elineminyaka eminingi yezindiza zangempela zezindiza zomhlaba ngaphansi kwebhande lethu. Sinecebo lokuqeqesha elinokuthuthuka kahle futhi sindiza kathathu ngesonto.
Njengamanje sisebenzela ukuthi iHawaii ibambe iqhaza kwiRIMPAC, bese siqhubekela olwandle lwaseNingizimu China ukuzobamba iqhaza futhi sihole ukusebenza kweKorea.
Sihlole, usazise uma unentshisekelo.
noma ulandele uhlelo lokusebenza lokuqasha kwiwebhusayithi yethu, futhi hlola i-facebook VCW-8 yethu.
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-6 ezedlule lharv71.
Isikhathi ukudala page: 0.138 imizuzwana